कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंमा के हुँदैछ ? – Enayanepal.com
कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंमा के हुँदैछ ?
१६ साउन, काठमाडौं।
यसपटक महाधिवेन हुने आशा
विवाद नमिले के हुन्छ रु
११ जिल्ला, केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर तथा उपत्यकाका आरआर, कमर्स, बानेश्वरलगायतका क्याम्पसमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती क्याम्पसबाट कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने समस्या छ। तर, निर्देशक समिति सदस्य घिमिरेले चाँडो विवाद नमिले विवादित जिल्ला र क्याम्पसबाट प्रतिनिधित्व नगराई महाधिवेशनको बाटो खुलाइने बताए। पार्टी एकीकरण नहुँदै ०६४ मा कांग्रेस पक्षधरको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट प्रदीप पौडेल र सोही वर्ष कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नेपालगन्जमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट कल्याण गुरुङ सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टी एकतापछि ०६४ असोजमा पौडेलकै नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तर, तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले ०६८ फागुनमा पौडेललाई हटाएर रञ्जित कर्णको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्दै ६ महिनामा महाविधेशन गर्न जिम्मा दिएयता महाधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। त्यसयता, पटक–पटक महाधिवेशनको मिति घोषणा हुँदै र स्थगित हुँदै आयो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।